Maxaa Kale Ee La Samayn Lahaa? Madaxweynaha FIFA Oo Taageeray Qorshaha Arsene Wenger Ee Koobka Adduunka - Laacib
HomeCiyaaro CaalamiMaxaa Kale Ee La Samayn Lahaa? Madaxweynaha FIFA Oo Taageeray Qorshaha Arsene Wenger Ee Koobka Adduunka
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta adduunka FIFA ee Gianni Infantino ayaa sheegay inay ka go’an tahay hirgelinta qorsheyaasha uu soo jeediyey tababarihii hore ee Arsenal ee Arsene Wenger, kaas oo ah in isbeddel lagu sameeyo koobka adduunka oo labadii sannadood ba hal mar la ciyaaro.
Fikfraddan oo mudan badan dhalisay, isla markaana ay kasoo horjeedaan dalal badan oo diiddan in isbeddel lagu sameeyo waqtiga afarta sannadood ah ee koobka adduunka lagu qabto ayaa waxa uu Infantino sheegay inay tahay wax u wanaagsan dalalka oo ay tahay in la hirgeliyo.
Laakiin waxa uu tibaaxay inay ku darayaan qodob kale oo dhigaya in waddamada laga mamnuuco inay laba koob adduun oo isku xiga ka qayb-galaan, taas oo macnaheedu yahay inay fursado badan heli doonaan waddamo aan hore uga qayb-geli jirin.
Tiago Craveiro oo ah xoghayaha xidhiidhka kubadda cagta Portugal ayaa hore ugu sheegay FIFA, in haddii ay doonayaan in qorshahoodu shaqeeyo, ay waddamada ka ilaaliyaan in laba jeer oo isku xigta laba sannadood gudahood ay ka qayb-galaan koobka adduunka.
Gianni Infantino oo ka hadlayay arrintan ayaa yidhi: “Waan soo dhoweynayaa fikradda Thiago, waxaynu u baahanahay inaynu ka qayb-qaadano, waxaana laga yaabaa inuu yimaaddo qaab labadii sannadood ba mar lagu qabto Koobka Adduunka, laakiin aanay dalal isku mid ahi ka qayb-gelin.”
Madaxweynaha FIFA oo Salaasadii ka hadlayay shir ay xubnaha xidhiidhku yeesheen ayaa waxa uu eedaymo u jeediyey dad aanu magacaabin oo uu tibaaxay inay ku hawlan yihiin ficillo lid ku ah kubadda cagta, kuwaas oo uu ku tilmaamay ‘cadowga kubadda cagta’.
Qorshaha ah in labadii sannadoodba mar la qabto Koobka Adduunka laakiin aan waddana loo ogolaanin inuu laba jeer oo isku xiga ka qayb-galo ayaa waxay keeni doontaa fursad ay dalal badan ku yimaaddaan.
Tusaale ahaan, waddamada Afrika oo ay shan dal uga qayb-galaan Koobka Adduunka, waxa mar kasta u tegi doona shan waddan oo cusub, taas oo ka dhigan in afartii sannadoodba ay toban waddan ka qayb-geli doonaan.